Hay'adda ICG oo ka digtay xaaladda Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Hay’adda ICG oo ka digtay xaaladda Soomaaliya
Kooxda Xasaradda Adduunka ee magacooda marka lasoo gaabiyo loo yaqaan ICG ayaa ka digtay xaaladda Soomaaliya, iyadoo walaac ka muujisay muran siyaasadeedka dalka ka jira!
MUQDISHO, Soomaaliya - Kooxda Xasaraha adduunka ICG oo ah hay'ad aan dawli ahayn oo la aasaasay 1995, waxay cilmi baaris iyo falanqeyn ku sameysaa dhibaatooyinka adduunka ka dhaca. waxay sheegtay in dalka Soomaaliya oo ay ka taagneyd xasarad siyaasadeed uu haatan galay wajigii ugu halista badnaa, Golaha Shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa 12-kii April meel mariyeen go'aan ah iney dalka doorasha qof iyo cod ah ay ka dhacdo muddo laba sano gudahood ah taasoo Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo u suurtagelineysa inuu laba sano oo dambe uu xilka sii hayo.
Go'aanka halka aqal uu gaaray ee muddo kororsiga ayey ICG ku sheegtay inuu yahay mid dalka Soomaaliya oo xaaladdiisaba markii hore caga badan ku taagneen iney uga sii dareyso loona baahan yahay in miiska wadahadalka loo soo noqdo si khilaafka jira wadahadal loogu dhammeeyo. ICG waxay soo jeedisay inkastoo laga dib dhacay, haddana beesha caalamka sida Midowga Afrika, Mareykanka, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub in loo baahan yahay iney u istaagaan iney abaabulaan ayna hoggaamiyaan wadahadallo cusub oo dhexmara dhammaan dhinacyada daneeya siyaasadd Soomaaliya si loo dejiyo tubti loo mari lahaa doorasha wakhtigeeda ku dhacda.
Dowladda Soomaaliya ayaa kahor inta aysan go'aanka muddo kororsiga ku dhawaaqin waxaa uu warbaahinta u sheegay wasiirka warfaafinta in shirkii udhaxeeyay madaxdii Soomaaliyeed uu istaagay, isagoo eedda dusha ka saaray laba kamida maamul goboleedyada kasoo horjeeda muddo kororsiga, taasina ay sababtay in xaaladda ay halis gasho.
Kooxda ICG waxay leedahay laba arrimood ayaa gacan ka hadal siyaasadeed sababi kara waxayna kala yihiin:
Dhinacyada siyaasadda ay Farmaajo isaga soo horjeedaan oo ay ka mid yihiin laba dowlad goboleed, labadii madaxweyne ee Farmaajo ka horreeyay, ra'isal wasaarihii hore kasoo lasoo shaqeeyay Farmaajo iyo xubno kale oo mucaarad ah oo iyagana abuuri kara isbahaysi xooggan oo mucaarad ah oo qabiilna salka ku hayo taasoo caqabad ku noqoneysa hirgelinta labada sano ee muddo kordhinta ah.
Waxaa cabsi weyn laga qabaa khilaafka siyaasaded ee taagnaa oo siyaasiyiinta un ku koobnaa inuu u gudbo laamaha ammaanka oo ay ciidamada hab qabiil ah u qaybsamaan iyada oo saraakiil ay ka mid yihiin General saadaq Joon iyo ciidama daacad u ah oo dowladda dhexe ka tirsanaa ay uga soo horjeesteen muddo kororsiga ayna ula saftaan mucaaradka Farmaajo ka soo horjeeda.
Arrimahaasi oo isbiirsaday waxay keeni karaan in waddanka uu galo xaalad cusub oo laga filan karo in uu qarxo dagaal xilli walba, magaalada Muqdisho oo ay dowladdu gacan ku haysay ammaankeeda caawa waxaa qeybo kamida ku sugan ciidan gadoodsan oo is uruursaday, madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo Sanatar ka tirsan Aqalka Sare oo hub farabadan haysta ayaa iyagana Waqooyiga magaalada Muqdisho ka dagay dhul ballaaran.